मैले नेपाल का लागि जे गर्दै आएको छु २००५ देखि, त्यसलाई पत्रकारिता भन्न मिल्दैन -- त्यो अपमानजनक कुरा हो। त्यो डिजिटल activism हो। २००५-०६ ताका आनन्द विष्टको जे योगदान रह्यो, मेरो त्यो भन्दा कमसेकम २० गुणा, ३० गुणा बढ़ी योगदान रह्यो, 50 गुणा बढ़ी। उ फुल टाइम हप्तामा सात दिने जॉब गरेर बसेको मान्छेको पार्ट टाइम activism ----- म फुल टाइम डिजिटल activism मा लागेको मान्छे।
उ गिरिजाको हौ हौ गर्दै बसेको मान्छे, मैले २००५ मा सात पार्टी र माओवादीको अलायन्स बनाउने कुराको गिरिजाले विरोध गरिरहँदा गिरिजालाई "मट्ठर बयल" भनेको मान्छे। तुलनै छैन। त्यो अलायन्स बिना २००६ को अप्रैल क्रान्ति संभव नै थिएन। त्यो कुरा गिरिजाले नदेखेको।
म फेरि मधेसी क्रांतिमा फुल टाइम दिएको मान्छे --- आनंद विष्ट त्यस क्रांतिको विरोधमा उभिएको मान्छे। काठमाण्डु सनेपामा पानी पर्दा यहाँ न्यु यॉर्क मा छाता ओढ्ने विष्ट। मैले उता बोलिएको कुरा यता सुनदिन भनेको होइन। तर उता जायज नाजायज जे कुरा भनिए पनि सुन्ने मेरो स्टाइल होइन। र आफ्नो कुरा त्यता पुर्याउने मेरो स्टाइल हो।
ढिलो चाडो संघीयता सहितको संविधान आउँछ -- त्यसपछि एक मात्र मुद्दा आर्थिक क्रांतिको हो। अनि त्यहाँ लेज़र फोकस को आवश्यकता पर्छ। म अमेरिका आउनु अगाडि नेपालको एक राजनीतिक पार्टीको उप महासचिव भएर बसेको मान्छेलाई गैर राजनीतिक मान्छे भनेर चित्रण गर्ने प्रयास ethnic prejudice हो भने त्यो ethnic prejudice व्यक्त गर्ने ठाउँ जैक्सन हाइट्स होइन, अर्कै ठाउँ खोजने। यो इलाका मेरो।
जनसम्पर्क भित्र जे हुन्छ त्यो मेरो लागि storm inateacup हो।
म आगामी ३० वर्षका लागि नेपालको आर्थिक क्रांति प्रति समर्पित छु। निष्पक्ष निर्वाचनमा जनताले चुनेको जुन सुकै पार्टीको मान्छे मलाई स्वीकार्य हुनेछ --- तर एउटा मात्र क्राइटेरिया छ। डबल डिजिट growth रेट दिन सक्ने प्रधान मंत्री पास, दिन नसक्ने फेल।
मोदीले बिलियन डॉलर का दुई दुई वटा हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपाल लान भ्याएका छन ---- काम गर्ने प्राइवेट कम्पनीले नै हो। पैसा प्राइवेट सेक्टर कै हो। नेपालमा लॉ एंड आर्डर को स्थितिमा सुधार हुन्छ भने, FDI का लागि सही वातावरण निर्माण हुन्छ भने ----- म प्रधान मंत्री नभएको मान्छेले पनि बिलियन डलरको प्रोजेक्ट नेपाल लान सक्छु। अहिले त पूँजी भएका हरु तरसिन्छन्। गूगल मा सर्च गर्छन अनि तरसिन्छन्। माओवादी भएको देश, माफिया गृह मंत्री भएको देश भन्छन अनि तरसिन्छन्। भारतका केही कम्पनी पसेर म जस्तो मान्छे का लागि बाटो प्रसस्त हुन्छ।
खगेन्द्रले एक पटक जित्यो, अर्को पटक पनि जित्छ होला, तर अहिलेको पाँच वर्षमा NRN अमेरिका को तल देखि माथि पूरै पैनल मेरो हुन्छ। म आफुलाई कुनै पद खानु छैन। तर पैनल मेरो हुन्छ। मेरो पैनल भनेको फुल democratization फुल digitization मा विश्वास गर्ने मानिस हरु हुनेछन्।
मेरो औपचारिक रोले मेरो कम्पनीमा छ र त्यहीँ रहन्छ। मेरा इन्वेस्टर हरु प्रति मेरो जिम्मेवारी छ। मेरा प्रोडक्ट का user हरु प्रति मेरो जिम्मेवारी हुनेछ। NRN मा मैले कुनै पद खाने छैन आफुले।
आगामी ३० वर्ष नेपालमा जुन सुकै पार्टीको प्रधान मंत्री आए गए पनि नेपालको आर्थिक क्रांतिको one indispensable person म हुनेछु। त्यो मेरो रोल को लागि म न्यु यर्क शहर बस्नु पर्छ। म एउटा सफल tech entrepreneur बन्नु पर्ने हुन्छ। बन्छु। My digital tools are enough.
ब्रिटिशले इंडियन सँग आफ्नो अधिकार माग्नुपर्ने यो शताब्दीमा
Robin Hood was hot, right?
Robin Hood's Oak Tree Is England's Tree of the Year
Robin Hood: Blue Cast
India & Its FDI Dilemma
China's sees soaring Outward Direct Investment
anand bisht Economic development economic growth economic revolution Nepal Nepali Congress Robin Hood Sheriff of Nottingham Sherwood Forest